विश्वका ५२ औं धनी जोडीसँग 9ः नेपाल आउँदा मृत छोरा हामीसँगै भएको अनुभूति हुन्छ
डा जिम र मर्लिन साइमन्स नेपालको ग्रामीण स्वास्थ्यमा काम गरिरहेको निक साइमन्स इन्सिच्युटका मुख्य दाता हुन्। उनीहरुले आफ्नो दिवंगत छोरा निक साइमन्सको सम्झनामा नेपालमा उक्त संस्था स्थापना गरेका हुन्। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने छोराको सपना पूरा गरिरहेका उनीहरु ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मी सम्मेलनमा भाग लिन यसै साता नेपाल आएका थिए। साइमन्स जोडीसँग स्वास्थ्य खबरपत्रिका लागि डा सुवास प्याकुरेलले गरेको कुराकानीः
तपाईं नेपाललाई किन यति धेरै माया गर्नुहुन्छ ?
जिम– मेरो छोरा निक अब यो संसारमा छैन । उसले जीवनकालका केही महत्वपूर्ण समय (९ महिना) नेपालमा बिताएको थियो । उसलाई नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा गर्ने चाहना थियो तर ऊ बितेर गयो । समय बित्दै जाँदा हाम्रो पनि नेपालीहरुसँग संगत र मित्रता बढ्दै गयो । छोराकै सम्झनामा उसले चाहना राखेअनुरुप हामी नेपालमा केही गर्ने योजना सहित आइरहेका हौं ।
मर्लिन– नेपालमा हाम्रो छोराले समय बिताएको छ । सेवा गरेको छ । सो समयमा हामी पनि छोरालाई भेट्न नेपाल आएका थियौं । नेपालमा बिताएको त्यो समय हाम्रा लागि निकै खुशी र आनन्ददायक थियो । अचम्म नै मान्नुपर्छ कि निकले आफ्नो करियर नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा, त्यसमाथि नेपालमै बनाउन चाहन्थ्यो । कुन अभिभावकलाई आफ्ना छोराछोरीको सपना पूरा गर्न मन लाग्दैन र ? हामीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा गर्दा पाउँदा एकातिर छोराको सपना पूरा भइरहेको छ भने अर्कोतिर हामीलाई ऊसँगै काम गरिरहेको अनुभूति मिलिरहेको छ । त्यसैले आज हामी नेपालमा छौं ।
तपाईंहरुले ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा नै किन छान्नुभयो ?
जिम– सुरुमा हामीले यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लियौं । हामीले तत्कालीन पाटन अस्पतालका प्रमुखहरुसँग भेट गर्ने मौका पायौं । सो भेटपछि हामीले सोही अस्पतालबाट काम थाल्यौं । नेपालमा के–कसरी काम गर्ने भन्नेबारे स्वास्थ्य क्षेत्रका केही व्यक्तिहरुको राय लियौं । त्यो समय पाटन अस्पतालमै काम गरिरहेका डा मार्क जिम्मरम्यानले हामीलाई समुदायमा आधारित मध्यमस्तरको स्वास्थ्य तालिम नै उपयुक्त बाटो हुनसक्ने सल्लाह दिए र हामी सोही सल्लाहलाई आत्मसास गर्दै अगाडि बढ्यौं । त्यसको आधारमा निक साइमन्स इन्सिच्युट सुरु भयो । त्यतिखेर कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती रहला भन्ने हामीले सोचेनौं । हाम्रो सोच तालिम मात्र दिने थियो । पछि सो अभियानले विस्तारै आफ्नो दायरा फराकिलो बनाउँदै लग्यो ।
तपाईंको मूल्यांकनमा लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छ ? कि त्यसमा अझै सुधार गर्नुपर्छ ?
मर्लिन– अहिलसम्मको कामले राम्रै नतिजा दिएको छ । केही जिल्लाबाट सुरु गरेको कार्यक्रम हाल नेपालका १८ जिल्लामा विस्तार भएको छ । हाम्रो सोच यसले अझै व्यापकता पाओस् भन्ने हो । हामीले सुरु गरेको कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभाव परेकोमा हामी खुशी छौं । हामीलाई अन्य अस्पताललाई पनि स्वस्थ्य सेवा क्षमता र स्तर वृद्धिका लागि सहयोग गर्न चाहन्छौं । यसमा हामीले आफ्नो पूरा शक्ति लगाइरहेका छौं । ग्रामीण क्षेत्रमा हामीले स्वस्थ्य सेवाको पहुँच पु¥याउने र नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौं ।
जिम– हामी तालिमलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौं । छोराको चाहनाअनुसार मेडिकल इन्जिनियरिङ, उपकरणको प्रयोग र एनेस्थेसियाको एक वर्षे तालिम सुरु गर्दैछौं । योसँगै विभिन्न कार्यक्रमको दायरा फराकिलो बनाउँदै गएका छौं ।
A Dream that Never Died
नेपाल अहिले पुनर्संरचनाको क्रममा छ । तपाईंको सुझाव के रहन्छ ?
जिम– पछिल्लो दुई वर्षदेखि नेपालको पुनर्संरचना हुँदै गरेको मैले सुनेको छु । सुरुमा मलाई लाग्यो– यति सानो देशमा किन ७ वटा प्रदेश बनाएको होला ? तर पछि महसुस गरें, केन्द्रीकृत रुपमा चलेको शासन प्रणालीबाट विकेन्द्रित हुँदा सेवाहरु पनि समुदायको पहुँचमा सहजै पुग्न सक्छन् । तर, सुरुवातमा यसको कार्यान्वयनमा केही झन्झट हुन सक्छन् ।
ग्रामीण स्वास्थ्य सम्मेलन किन आवश्यक ठान्नुभयो ?
मर्लिन– जब स्वास्थ्यकर्मीहरुले समुदायमा एक्लै काम गर्छन्, त्यतिबेला परेका समस्या वा जिज्ञासा मेटाउने ठाउँ नपाउन सक्छन् । कतिपय अवस्थामा आफूले गरेको अनुभव अर्कोलाई सेयर गर्न पनि पाउँदैनन् । तर, यस्ता सम्मेलन आयोजना भएपछि उनीहरुले एकअर्कामा आफ्ना मात्रै होइन, आफूले काम गरेको समुदायका समेत अनुभव साट्न पाउँछन् । जिज्ञासा मेटाउन पाउँछन् । जसले फेरि उनीहरुलाई समुदायमा फर्केर काम गर्न उत्साह प्रदान गर्छ । आत्मविश्वासी बनाउँछ । ग्रामीण स्वास्थ्य सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको योग्यता तथा क्षमताको प्रवद्र्धन गर्नु नै हो ।
जिम– मुख्य कुरा भनेको सहभागिता हो । पछिल्लो ९ वर्षदेखि हामीले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं । धैरे स्वास्थ्यकर्मीले भाग लिएका छन् । जसको प्रतिफल स्वरुप उनीहरुमा समुदायबीच गएर काम गर्ने हौसला र आँट बढेको छ ।
एमडिजिपीले देखाइसकेका छन् कि, हामीसँग धेरै ज्ञान र अनुभव हुन्छ तर त्यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको हुँदैन । चिकित्सक, विज्ञ तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको अनुभवलाई प्रवद्र्धन र सम्मान गर्नु नै कार्यक्रमको ध्येय हो ।
एनएसआईले दिइरहेको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन तपाईं नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?
जिम– सुरुमा हामीले सरकारसँगै काम गर्ने सोच बनाएका थियौं । सोही अनुरुप नै हामीले काम गर्न थाल्यौं । सरकारी अंगहरुको संयुक्त शक्तिले नै हामीलाई यहाँसम्म ल्याइपु¥याएको हो । जहाँसम्म थप सहयोगको कुरा छ, हामीले हाल सञ्चालनमा ल्याएको जिल्ला अस्पताल सुधार कार्यक्रममा नेपाल सरकारले सहयोग गर्न सक्छ । हाल १८ बाट हामीले ८० देखि ८३ अस्पतालमा सेवा विस्तारको पहल गरिरहेका छौं । सरकारले कम्तिमा ३० वा ४० अस्पतालमा सहयोग गर्न सक्छ । मलाई सरकारले समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिने एमडिजिपीको सेवा तथा क्षमता विस्तारमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
हामीले सरकारसँग अझै काम गर्न चाहिरहेका छौं । सरकारले हाम्रा कार्यक्रममा सहकर्मीका रुपमा काम गर्न सक्छ । सरकारले यो बुझिदिनुपर्छ कि, हामी नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न खोजिरहेका छौं । हामी नेपालीहरुसँग धेरैभन्दा धेरै काम गर्ने अवसरको खोजीमा छौं ।
नेपालीलाई तपाईंको कुनै सन्देश ?
जिम– नेपाल विस्तारै राजनीतिक स्थिरतातर्फ अगाडि बढिरहेको छ । भर्खरै मात्र नयाँ प्रधानमन्त्री नेपालले पाएको छ र यो सरकार लामो समय शक्तिमा रहने देखिएको छ । कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसकारण नेपाल पनि विस्तारै त्यही बाटोमा अगाडि बढोस् भन्ने कामना गर्छु ।